Xarun cusub oo ay ku shaqeynayaan ciidamada Booliska ee Miino Baarista oo laga furay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Xarun cusub oo ay ku shaqeynayaan ciidamada Booliska ee Miino Baarista oo laga furay Muqdisho
axaa maanta magaalada Muqdisho laga furay xarun cusub oo ay yeelanayaan ciidamada Booliska Somaliyed, gaar ahaan kuwa qaabilsan qaybta Miino Baarista.
Munaasabadii lagu furaayay xaruntaan Booliska cusub ayaa waxaa ka qaybgalay Wasiirka Amniga, C/risaaq Cumar Maxamed, Taliyaha ciidamada Booliska Somaliyed iyo Saraakiil ka tirsan ciidamada.
Taliyaha ciidamada Booliska Somaliyed General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa sheegay inay muhiim u tahay ciidamada Booliska Somaliyed qaybta qaabilsan Miino Baarista.
“Kooxdan waa kooxda aan is dhihi karo kooxda ugu horeyso ee booliska Soomaaliyeed oo saddexdii qodob ee aas aasiga ahaa isku heysata, waxaana rajeyneynaa in maalinba qeyb ka mid ah booliska aan u tayeyno, oo qalabkii loo siiyo, oo daryeel ay helaan, waxana kaloo rabaa in aan halkaan amaan uga soo jeediyo taliyaha kooxda Gaashaanle dhexe Cabdikariin oo runtii isagu muujiyay hogaamin wanaagsan, kudayo badan ayay noo leedaya, koox waliba iyo hogaan waliba waxaan laga rabaa inay isku duubnaadaan, isla markaana ay fahmaan waajibaadka looga fadhiyo” ayuu yiri Taliyaha ciidanka booliska.
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa ammaan u jeediyay ciidamada Booliska qaybta Miino barista oo uu sheegay inay yihiin kuwa lagu faano, wuxuuna Mahad celin u jeediyay Taliyaha ciidamadaasi.
“Farxad ayay ii tahay in aan idinkala qeyb galo munaasabadan lagu furayo xaruntan cusub, runtii ku timid dadaal badan oo ay saraakiishu ku bixiyeen, runti aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay taliyaha meeshan Cabdikariin uu qabtay, waa wax lagu farxo, waa wax noo noqon karto tusaale fiican, waxaan soo jeedinayaa inay ku daysadaan hay’adah kale ee dowladda” ayuu yiri Wasiirka Amniga gudaha.
Booliska Somalia qaybta Miino baarista ayaa naftooda Qatar u geliya waxyaabaha qarxa ee meelaha lagu aaso sidii ay u kala fur furi lahaayeen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo la kulmay Guddiga madaxa banaan ee xuduudaha (Daawo Sawirada)
Magaalada Boorama oo maanta lagu toogtay Laba Sarkaal